DAAWO FADEEXADDAN: Fanaanad Caan Ah Oo Sheegtay In Caruur u Dhashay Qalbi Dhagax, Walibana Uu Yahay… - Hablaha Media Network
DAAWO FADEEXADDAN: Fanaanad Caan Ah Oo Sheegtay In Caruur u Dhashay Qalbi Dhagax, Walibana Uu Yahay…
HMN:- Fanaanada reer Jigjiga ee caanka ah Aamino Xaashi ayaa iyada oo soo xiratay niqaab waxay sheegtay in Seddex Caruur ah ay u dhashay C.kariin Qalbi Dhagax oo maalin cad loo gacan geliyey Itoobiya.
Fanaanadan oo moodeysay inaan la aqoonsan doonin qaab muuqeeda iyo sidoo kale codkeeda ayaa waxay sidoo kale u gaftay Qalbi Dhagax iyo sidoo kale xaaskiisa Seddexaad ee Muqdisho joogta.
Qalbi Dhagax waxay ku sheegtay inuusan Shareecada Islaamka dhowri jirin, islamarkaana guursaday wax ka badan Afar Xaas.
Iyada oo jees jeeseysa ayeey sheegeysaa Fanaanaddan in Xaaska Muqdisho u joogta Qalbi Dhagax ay sixirtay.
Hadaba baaritaan aad u dheer ayaan sameennay, waxaana idiin keennay cadeyn buuxda oo ah in waxa hadlaya tahay Fanaanad Aamina Xaashi oo Jigjiga caan ka ah, waxaana sidoo kale qorshahan ka qeybqaatay xubno ka tirsan DDSI iyo ESTV.
Muuqaalka hore ee aad daawaneysaan waa aamino oo Niqaab xiran, ama indho Shareer, kadibna waxaan idiin xiga iyada oo caadi looga wareysanayo barnaamij faneed, waxaadna isku miisaami kartaan ugu yaraan Labada cod.
FG: Xogtaan waxaa inala wadaagay xubno ku sugan DDSI